MOMBA ANAY - Qingdao Godn Teknolojia Co., Ltd
Ny orinasa naorina tamin'ny 1999. Ny fahombiazana voalohany dia tratra alalan 'ny fanorenana takatry ny hatsaran'ny mitambatra feon'ireo milina, ny ankamaroan'ny izay mbola ampiasaina ankehitriny.
Nandritra ny taona maro ny isan-karazany ny vokatra dia omena amin'ny milina mandeha ho azy sy namaoka fanafody milina sy ny andian-tifitra tsipika izay ampiharina be dia be ao amin'ny orinasa fanaka.
Hatrany am-boalohany hiarovana ny iraka: fanatitra vokatra tsara indrindra amin'ny toetra / vola an-tsena. Zavatra filozofia dia hita indray eo amin'ny endrika, ny famokarana, ny varotra sy ny mpanjifa fanohanana.
Matihanina sy avo-nahita fianarana R & D ekipa ambony dia manome fahafahana antsika amin'ny tombony ho an'ny vahaolana namboarina. Mitohy fanatsarana ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra mitarika ho amin'ny tsara naorina tany toetry ny zavakanto trano orinasa mpamokatra entana, dia toy izany no fanatanterahana ny fepetra takiana mpanjifa ilaina.
GODN manana mpivarotra iraisam-pirenena harato sy fanondranana 75% ny ny famokarana eran-tany ho any amin'ny firenena mihoatra ny 100 sy ny faritra